फेसबुकले आफ्नो भिडियो च्याट एप बन्द गर्ने भएको छ । ग्रुप भिडियो च्याटको प्रमुख एप हाउसपार्टीको एक क्लोन बन्द गर्ने निर्णय फेसबुकले गरेको हो । द भर्जको रिपोर्ट अनुसार बोनफायर नामको क्लोन एप यहीँ महिनादेखि नै बन्द हुनेछ ।
सन् २०१७ को अन्त्यमा फेसबुकले डेनमार्कमा यो एपको परिक्षण शुरु गरेको थियो । फेसबुकले भनेको छ, ‘मेमा हामीले बोनफायर बन्द गर्दैछौं । हामीले यसबाट जे सिक्यौं त्यसलाई हामीले विद्यमान तथा भविष्यका अन्य प्रडक्टहरुमा सामेल गर्नेछौं ।’
मेरो श्रीमान् बिगार्ने महिला नै हो
मेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस ! म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन् ! हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्रष्टाचारि, जड्याहा, पर स्त्री गमन (बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने) यस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ ! आफ्नो श्रीमानलाई ।
अनावश्यक तनाव (अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर)
अनावश्यक केयर (बारम्बार निगरानी केरकार) माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने यस्ता काम कहिले नगर्नुहोस्ने । पाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न ।
हामी महिलाहरुले नै पुरुषलाई भ्रष्टाचारि, जड्याहा, पर स्त्री गमन (बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने), एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ ।
आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव (अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर) अनावश्यक केयर (बारम्बार निगरानी केरकार)
माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने
एस्ता काम कहिले नगर्नुहोस् । नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न ।